2 iminyaka inyanga 1 edlule #850 by ama-goffers
Hiya. Ngiye ngimisa kusukela nge-1997.
Ngidale izengezo eziningi zokubukeka ze-FS9 ne FSX, kanye nokubuyiselwa okumbalwa.
Amanye amalungu angase akhumbule insiza yami yokuzijabulisa e-in-flight ye-FS9.
Ngajoyina i-Rikoooo ngoba ukuhlelwa kwewebhu kucacile - futhi ukunakwa okunikezwayo ukuvuselela indiza ye-freeware yangaphambili.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #853 by Dariussssss
Siyabonga ngamagama amahle, futhi ngikujabulele kakhulu ukuthi ngikugibele. Ngikhumbula ukuthi losizo, nginalo lokho ku-FS9 yami, akukubi.
Zizwe ukhululekile ukuhlola futhi uma udinga noma yikuphi usizo, nansi indawo ozoyibuza.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #862 by ama-goffers
UDariussssss wabhala: Sawubona futhi wamukeleke ku-Rikoooo.